Maxaa ka soo baxay kulankii maanta ee hay’adaha u xilsaaran dib u eegista Dastuurka? – HalQaran.com
Update: Wasaaradda Caafimaadka oo diiwaan-gelisay Kiisas cusub oo Coronavirus ah
Hay’adda IOM oo agab looga hortagayo Covid-19 ku wareejisay Wasaaradda Caafimaadka Somaliya
Taliyaha ciidanka xoogga dalka ‘Odawaa’ oo kormeer ku tagay xerada 21-aad + (SAWIRRO)
Madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo ugu dambeyn ka heshiiyay khilaafkii
February 29, 2020 HalQaran Staff	1 Comment Hay'adaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya, Hirgelinta Dastuurka
Muqdisho (Halqaran.com) – Shir u dhaxeeya Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, Gudigga La-socodka Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ee Baarlamaanka iyo Gudigga Madaxabannaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ayaa manta ka dhacay Muqdisho, kulanka oo looga dooday howlaha horutabinta u leh dhameeystirka dastuurka ayaa waxaa furay Wasiirka Arrimaha Dastuurka Mudane Saalax Axmed Jaamac.
Shirka oo ka dhacay xarunta Aqalka Sare ee ay ku shaqeeyaan gudigga Baarlamaanka ayaa qodobada looga dooday waxaa kamid ahaa is-wareysi ku aadan howlaha u qabsoomay seddexda hay’ad iyo howlaha taagan ee u baahan in la qabto.
Wasiir Saalax Axmed Jaamac oo kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay waxqabadka Wasaaradda ee bilihii la soo dhaafay.
“Sida aad la socotaan waxa aan kulamo-howleedyo la yeelanay in ku dhow 20 wasaarad oo katirsan XFS, kulamadaas oo lagu lafagurayay wasaarad walba doorka ay ku leedahay dhameeystirka dastuurka si loo helo aragti mideysan oo Dowladda Federaalka ku wajeheyso dhameeystirka dastuurka lagana hortago in hay’adaha dowladda isbar-baryaacaan si aanu dib-u-dhac ugu imaan dhameeystirka dastuurka” ayuu yiri Wasiir Saalax.
Dhanka kale, Gudoomiyaha Gudigga La-socodka Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ee Baarlamaanka Senator Cabdiqaybdiid iyo Gudoomiye Ku-xigeenka Gudigga Madaxabannaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka Marwo Muumino Sheekh ayaa si wadajir ah uga warbixiyay howlaha u qabsoomay iyaga oo sheegay in ay dhamaad ku dhowdahay qodobada dastuurka ee farsamo ahaan u baahan in la saxo.
Sidoo kale labada guddi waxa ay sheegeen iyaga oo fulinaya codsi ugu yimid Gudoonka Baarlamaanka in dhowaan marka uu furmo Kala-fadhiga Baarlamaanka ay horgeeyn doonaan warbixin soo koobeysa howlaha dib-u-eegista dastuurka.
Ugu dambayn, seddexda hay’ad ayaa wax ay ku ballmaan in la joogteeyo wadashaqeynta lana kordhiyo kulamada la-tashiga dadweynaha si waqtigii loogu talagalay loogu dhameeystiro dastuurka.
← DAAWO SAWIRRO: Guddoomiyaha golaha shacabka ee BF Somaliya oo tegay dalka Jabuuti
Husband held for trial in beating death of Somali wife in City Heights →
October 11, 2019 October 11, 2019 Halqaran 0
Maxay tahay caqabadda ay la kulantay gabadha Soomaalida ah ee ka mid noqotay baarlamaanka Sweden?
VIDEO: Wasiirka Caafimaadka oo Ka War Bixisay Xaaladaha Covid-19 ee Dalka Laga Diiwaan Geliyay
May 11, 2020 May 11, 2020 HalQaran Staff 0
One thought on “Maxaa ka soo baxay kulankii maanta ee hay’adaha u xilsaaran dib u eegista Dastuurka?”
War meeshaas doorasho kamasoo socoto, Farmaajio iyo saaxiibadiis marabaan, ha is dhibina, bal aan aragno ragaan, Hogaanka u haya wadanka meesha ay ku furaan.
The leader of Galmudug State in central Somalia, Ahmed Abdi Kariye has announced new plan to disarm militias in the
May 31, 2020 May 31, 2020 Halqaran 0